Nepal Dayari | सात दिन देखि भोकै बसेका परिवारलाई आयो घरै भरिने गरि सहयोग (भिडियो हेर्नुस)
अषोज ४, २०७८ सोमबार १९५४ पटक हेरिएको
बाग्लुङ जिल्लाको बढिगड गाउँपालिका १ स्थित नरेश पुन मगरको घरमा एक वृद्ध आमा सहित ३ छोरा, तिन छोरी श्रीमती छन । केही समय अघि नरेश पुन मगरको हात भाँचियो । हात भचिए पछि केही काम गर्न नसकेका उनको परिवार भोक भोकै बसेको उनले बताएका थिए । हात भाँचिएर श्रीमानले केही गर्न नसकेको र आफू पनि काम गर्न नसके पछि घरमा खाने केही नभएको उनकी श्रीमतिले बताएकी थिइन् ।
नरेशको घरमा पुग्दा सात दिन देखि भोकै रहेका उनका स साना छोराछोरीहरु भुइँमा त्यसै लडिरहेको अवस्थामा भेटिएका थिए । कतै माग्न जादाँ पनि काम गरेर खानु पर्ने भन्दै गाली गर्ने गरेको नरेशकि श्रीमतिले सुनाएकी थिइन् । उनको घरमा न त खानलाई केही थियो न सुत्ने बस्ने नै थियो । स-साना नानीहरु चिसो भुइँमा रात बिताउने गरेको दृश्य हामिले देखेका थियौ । उक्त भिडियो सार्वजनिक भए पछि भने उनको परिवारलाई थुप्रै सहयोग प्राप्त भएको छ ।
नरेशको परिवारको त्यो अवस्थाको भिडियो बाहिरिए पछि गरिब असहायका लागि खाद्यान्न तथा शैक्षिक सामाग्री बितरण गर्दै आएको, काठमाडौँमा रहेको संस्था भि. जि. फाउन्डेसनले अहिले नरेशको घर बाग्लुङमा सहयोग सामाग्री लिएर आएको छन । उक्त संस्थाले खानाका लागि दाल, चामल लगाएत लत्ताकपडा, शैक्षिक सामाग्री, खेलौना लगायतका सामाग्रीहरु ल्याएको हो । उक्त संस्थाले थुप्रै यस्ता सहयोग आवश्यक भएकाहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
आफुलाई घरमा आर्थिक समस्याले सताइरहेको र गाउँघर तिरै खेतीपाती गरेर जसो तसो दुई छाक टार्ने गरेको नरेशले बताए । तर आफ्नो हात भाँचिए पछि भने भोकै रहेको उनले बताए । आफू त जस्तो तसो दिन रात बिताउने गरे पनि साना छोराछोरीहरु त्यो नबुझ्ने भएकोले खान खोज्ने गरेको बताउदै त्यो अवस्था देख्दा आफुलाई धेरै दुख लाग्ने गरेको उनी बताउँछन । तर जति नै दुख भएता पनि आफू हस्त भाँचिएर केही गर्न नसकेकोले छोराछोरीलाई भोकै राख्न बाध्य भएको उनले सुनाए ।
यश अघि सहयोग कतै बाट नपाएको उनले बताए । अहिले घरै भरिने गरि सहयोग त्यो पनि यस्तो अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा पाउँदा आफुलाई धेरै राहत महसुस भएको उनले बताएका छन । साथै उनका साना छोराले आफुले खेल्ने कुरा पाउँदा खुशी भएको बताए । उनकी छोरिले अहिले सम्म आफ्नो लाउने कपडा, स्कुलको लागि किताब कपि केही नभएको अवस्थामा यति धेतै खाने कुरा सहित सम्पुर्ण कुराहरु पाउँदा धेरै खुशी भएको बताइन । (भिडियो